Nezve Aasraw Biochemical Technology Co., ltd
Aasraw Biochemical Technology Co, ltd yakavambwa nevashanu vakapedza kudzidza Ph.D vakapinda mumakemikari Engineering kubva kuYunivhesiti yeTulsa, Oklahoma, iri munharaunda yemoyo weUnited States.
Iyo ichangotangwa AASraw yakawana kukosha kwekutanga mari, uye nekudaro yakakwezva huwandu hwemhando yepamusoro chemakemikari, mazhinji aine kunyanya kusimbiswa muindasitiri yemakemikari. Nedenderedzwa rakabudirira rekutanga mari, takaisa mari mumhando yepamusoro yezviridzwa yakatsaurirwa kune iyo synthesis, kunatsa, uye kuongorora kwedu chigadzirwa mutsetse. Isu tiri yakazara synthesis murabhoritari, uye kwete chete mutengesi wezvimwe zvigadzirwa zveimwe kambani. Isu tine izere suite yemidziyo, inosanganisira - kusiyanisa scanning calorimetry, yakakwirira-performance liquid chromatography, infrared spectroscopy, ultraviolet-visual spectroscopy nezvimwe. Parizvino tinoshandisa vanopfuura mainjiniya ekiyi ehunyanzvi. Zvinhu zvedu zvakatemwa zvinopfuura mamirioni makumi matatu emadhora
Kuwedzera kune mapurogiramu edu ekushandira pamwe kwenguva refu, takaronga mapurogiramu mashanu kusvika masere matsva emakore. MASHOKO anokwana makiromiti anopfuura zana mukutakura kwevakawanda. Inenge makumi masere makumi mapfumbamwe emakemikari aya anopiwa zvakananga kune vatengi, asi inenge makumi maviri inobudiswa pasi pesangano kune makambani makumi matatu emishonga pasi rose.
Ichitevera chirevo "Huchenjeri, Kutenda, Sevhisi," AASraw iri kupa zvinhu nemhando yakasarudzika, mutengo wakaderera, uye kugona kwakazara kubatsira zvirinani hupenyu pasi rese. Zvese zvigadzirwa kubva kuAASraw zvinopihwa nehutsanana husingasviki 98%, uye zvese zvinodzorwa zvakadzika pasi peIO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP kana zvimwe zvitupa sezvinodiwa kuzadzisa zviyero zvinodiwa zvekunze kwenyika.
Innovation ndiyo inopa simba redu. Nebasa rakaoma revashandi vedu vakazvitsaurira, kutsungirira kwavo, pamwe nekushanda kwedu kwebasa pamwe nemabhizimisi akabatana, makoroji uye masangano, AASraw yakagadzirisa kushanda kwedu pamwe nekusvika 30%, zvichibatsira kuderedza mitengo yedu nekuenzaniswa nevamwe vatengesi, saka zviri nani kushumira vatengi vedu vakavimbika, pamwe nekuderedza dhayi inopinda munzvimbo.
AASraw iri kuedza kugadziridzwa muchengeti wehutano uye mutengo. Tinopa rubatsiro rwekutendeseka, uye hukuru hwemakemikari uye vadzidzisi, kuti vakuunzire iwe chete zvakanakisisa mumakemikari. Tiri kuisa mhando itsva yehutano mumhizha redu.